Somalia:Guddoomiye Kuxigeenka 1aad Oo Sheegay Xil ka qaadistii Lagu Sameeyay in ay tahay Sharci darro | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > TFG Somalia, WARARKA	> Somalia:Guddoomiye Kuxigeenka 1aad Oo Sheegay Xil ka qaadistii Lagu Sameeyay in ay tahay Sharci darro
Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi weli Ibraahim Sheekh Muudeey oo la hadlay Idaacadda qaranka ayaa sheegay in sharci darro tahay mudanayaal ka tirsan Baarlamaanka in ay xilka ka qaadaan, isagoo xusay in aan loo marin waddadii saxda ahayd.
Sidoo kale waxa uu tilmamaay, in doorashada guddoon cusub ay iyana tahay mid ku saleysan fowdo oo lagu doonayo in qaranka lagu qal qal galiyo, isla markaana aysan jirin wax sharci ah oo ay u mareen dhammaan mudanayaashii arrintaasi sameeyay.
Cabdi weli Muudeey ayaa hoosta ka xariiqay in xilka laga qaadi karo laakin loo baahay yahay arrin waafaqsan sharciga dalka u degsan.
Ugu danbeyntii ayuu ugu baaqay mudanayaasha xilka ka qaadista ku sanmeeyay in ay dhowraan marxaladda dalka uu marayo iyo sharafta Baarlamaanka.
Egypt’s prosecutor wants death sentence for Mubarak Somalia:Guddiga Amniga qaranka oo canbaareeyay falkii ka dhacay xarunta golaha shacabka